स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, १८ मङ्सिर २०७५)
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ५८ करोड ४५ लाख रहेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यो नाफा गत आवको सोही अवधिमा रू. ४७ करोड १२ लाख थियो । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
रू. ८ अर्ब १ करोड चुक्तापूँजी पुर्‍याएको कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. ६ अर्ब ७८ करोड छुट्याएको छ । २०७४/७५ को नाफाबाट कम्पनीले शेयरधनीलाई १७ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको कात्तिक २४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् ।
2018-12-04 - 208 view(s) - abhiyan